२,८३८ सङ्क्रमित थपिए, १,४७५ लाई स्वास्थ्य लाभ
पाँच महिनापछि ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक नगर पनौतीमा एक महिना मकर मेला लाग्छ । हरेक बाह्र वर्षमा हुने ‘मकर मेला’को तयारीस्वरुप धमाधम भौतिक पूर्वाधारका काम भइरहेका छन् भने सँगसँगै प्रवद्र्धनका कार्यक्रम थालिएको छ । नगरपालिकाले वर्ष दिनअघिदेखि नै मेलाको तयारीस्वरुप पनौतीस्थित सचीतीर्थ–त्रिवेणीघाटलगायत नगरका विभिन्न क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारको काम थालेको थियो ।
राजकुमार पराजुली ७ घण्टा पहिले
खोपले कति समय काम गर्छ त्यो एकिन छैन तर खोप लगाएकालाई संक्रमण भइहाले असर कम गर्छ : डा. पुन (भिडियोसहित) विश्वराज खनाल
अमेरिकाबाट नेपालमा खोप लैजान पहल भइरहेको छ : राजदूत डा. युवराज खतिवडा मधुकर अधिकारी
जापान–नेपाल सम्बन्ध थप उचाइमा पु¥याउन प्रयत्नशील रहनेछु : जापानी राजदूत सोमनाथ लामिछाने । एकराज पाठक
निलम्बनको कदम ‘पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्ने’ माधव नेपालको घोषणा शब्दपाटी
बङ्गलादेशसँगको आर्थिक साझेदारीमा नयाँ आयाम : परराष्ट्रमन्त्री प्रकाश सिलवाल
पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छन : प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली शब्दपाटी
ललितपुर महानगरले ४५ वर्ष माथिकालाई भेरोसिल खोप लगाउने
चर्काे घाम र छिन छिनमा पानी पर्दा महोत्तरीमा बढ्यो सर्पको बिगबिगी
छिन्नमस्ता भगवतीको मुकुट भेटियो
बालबालिकालाई तेस्रो लहरबाट बचाउन खोप र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न निर्देशन
शब्दपाटी बुधबार, साउन ६, २०७८
काठमाडौँ । आज देशभर दुई हजार ८३८ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार १२ हजार ६१६ जनामा परीक्षण गर्दा दुई हजार ८३८ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा आठ हजार ७१५ जनाको पिसिआर र तीन हजार ९०१ जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो । आज पुष्टि भएको नयाँ सङ्क्रमितसँगै देशभर बिरामीको सङ्ख्या सात लाख २४ हजार ४५५ पुगेको छ भने छ लाख ३६ हजार ४०२ जना पूर्ण स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किएका मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीे जानकारी दिए । अहिले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २६ हजार ८३२ रहेको छ । उनका अनुसार नेपालमा सङ्क्रमणदर १९.२ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । पिसिआर परीक्षण गरिएकामध्ये दैनिक २५ प्रतिशतलाई सङ्क्रमण भइरहेको उनले बताए । एन्टिजेनबाट परीक्षण गर्दा २१ प्रतिशतमा सङ्क्रमण भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य लाभपछि १,४७५ जना घर फर्किए
आज स्वास्थ्य लाभ गरेर घर फर्कनेको सङ्ख्या एक हजार ४७५ पुगेको छ । योसँगै घर छ लाख ३६ हजार ४०२ घर फर्किएका छन् । यस्तै आज ३० जनाको सङ्क्रमणका कारणले निधन भएको छ । योसँगै नौ हजार ६३७ जना सङ्क्रमणका कारणले निधन भएका छन् । प्रति १० लाख जनसङ्ख्यामा ३२४।८ जनाको निधन भएको छ । उनका अनुसार २४ हजार ३४० जना होम आइसोलेशन, दुई हजार ४९२ जना संस्थागत आइसोलेशन, ६२७ जना सघन उपचार कक्ष र १७१ जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा ६९७ जना थपिए
काठमाडौँ उपत्यकामा ६९७ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । ललिपुरमा १२८ जना, काठमाडौँमा ४९० र भक्तपुरमा ७९ जना सङ्क्रमण थपिएका हुन् । उनले अझ पनि धेरै व्यक्ति सङ्क्रमित आशङ्कामा रहेकाले परीक्षणको दर बढाउनुपर्ने बताए । “जति धेरै परीक्षण ग¥यो । त्यति नै मानिसलाई बचाउन सकिन्छ”, उनले भने, “त्यसैले सङ्क्रमितको सङ्ख्या पत्ता लगाउनका लागि परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्दछ ।” सहप्रवक्ता अधिकारीले खोप सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने बताए । उनले खोप लगाउन जाँदा भीडभाड नगर्न र जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड लागू गर्न आग्रह गरे । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा अनुप बाँस्तोलाले निधेषाज्ञा खुकुलो भएसँगै सङ्क्रमणको दर बढेकाले जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरे ।
उनले अहिले पनि अस्पतालमा कोभिड–१९ का सङ्क्रमित आउने क्रममा कमी नभएकाले सचेत रहन आग्रह गरे । उनले कोभिड–१९ सङ्क्रमण निको भए पनि मासपेशी दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, मानसिक समस्या हुनेजस्ता समस्या देखिने गरेकाले समयमा नै उपचार गर्न आग्रह गरे ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ६, २०७८, २१:५०:००
बुधबार, साउन २०, २०७८, २०:३८:०० दार्चुला घटना : भारतसित वार्ता गर्न प्रतिपक्षी सांसदको माग
बुधबार, साउन २०, २०७८, २०:२८:०० सङ्क्रमण चार हजार नाघ्यो, ३५ जनाको निधन
बुधबार, साउन २०, २०७८, २०:२३:०० एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको मिर्गौला प्रत्यारोपण
बुधबार, साउन २०, २०७८, १५:४२:०० महाकाली प्रकरणमा भारतले क्षमायाचना गर्नुपर्छ : माओवादी
बुधबार, साउन २०, २०७८, १५:३२:०० सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्ने निर्णय सच्चाउन एमालेको माग
बुधबार, साउन २०, २०७८, १५:२४:०० इचङ्गुनारायण मन्दिरबाट राधाकृष्णका चार मूर्ति चोरी
दार्चुला घटना : भारतसित वार्ता गर्न प्रतिपक्षी सांसदको माग
सङ्क्रमण चार हजार नाघ्यो, ३५ जनाको निधन
एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको मिर्गौला प्रत्यारोपण
महाकाली प्रकरणमा भारतले क्षमायाचना गर्नुपर्छ : माओवादी
सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्ने निर्णय सच्चाउन एमालेको माग
संरक्षणको पर्खाइमा न्यूरेनी ताल
सिन्धुलीगढीस्थित युद्ध संग्रहालयको अवलोकनमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री
डोटीमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढे
साझा कार्यक्रम तय गर्न गठबन्धन दल छलफलमा
बझाङ सदरमुकाम चैनपुर जोड्ने सडकखण्ड अवरुद्ध
अपाङ्गता परिवारलाई छाक टार्न समस्या राजेन्द्रप्रसाद पनेरु
जुम्लाको कनकासुन्दरीमा सञ्चारको पहुँच शब्दपाटी
अरब सागरको चक्रवातबाट मौसममा बदली शब्दपाटी
विहेको २७ वर्षपछि मेलिन्डा गेट्ससँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै बिल गेट्स शब्दपाटी
प्रत्यारोपित तथा अङ्गदाता र चिकित्सकबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल शब्दपाटी
कोरोना भाइरस सङ्क्रमित एउटा जोडीको अस्पतालमा अन्तिम भेट शब्दपाटी
लकडाउनको क्षेत्र बढाउँदै जापान शब्दपाटी
मौसम सफा भएसँगै गर्मी महसुस शब्दपाटी
प्राध्यापक तथा विद्यार्थी सङ्गठनको आन्दोलनका कारण मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको परीक्षा अनिश्चित
अनुमतिविनै तनहुँमा विद्यालय सञ्चालन
ट्युसन सेन्टर १५ महिनादेखि बन्द, व्यवसायी वैकल्पिक पेशाको खोजीमा
© शब्द पाटी - Shabda Pati. -2021 All rights reserved. Site by: SoftNEP